वर्षाको कारण नेपाल बाहिरिने डर! | Hamro Khelkud
वर्षाको कारण नेपाल बाहिरिने डर!
एजेन्सी – एसिसी महिला टि२० च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल र युएईबीचको खेल भारी वर्षाको कारण प्रभावित बनेको छ ।
मलेसियाको किनरारा एकेडेमी ओभलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएई १९.५ ओभरमा ८१ रनमा अल आउट भएको छ । नेपालकी तीव्र गतिकी बलर अश्मिना कर्माचार्यले पाँच विकेट लिएपछि नेपालले ८२ रनको सामान्य लक्ष्य पाएको हो । तर दोस्रो इनिङ आधा घण्टा भन्दा बढी समय हुँदा सुरु हुन सकेको छैन ।
मैदानमा अहिले पनि वर्षा जारी छ । यदि यस खेल हुन नसकेको खण्डमा भने नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल समूह बी को उपविजेता र युएई समूह ए को विजेता हो । खेल हुन नसकेको अवस्थामा युएई समूह विजेताको कारण फाइनलमा पुग्नेछ ।
फाइनल शनिबार हुँदा रिजरभ डे छैन । अर्कोतर्फ यसै मैदानमा आज दिउँसो १२ बजेदेखि खेल दोस्रो सेमिफाइनलमा हङकङ र मलेसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यसैले खेल नभएमा नेपाल बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । नियम अनुसार नतिजा आउन नसकेमा युएई समूह विजेता हुँदा यस खेल खेलको पनि विजेता बन्नेछ । फाइनल पुग्ने टोलीले एसिया कप खेल्न पाउनेछन् । एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र थाईल्यान्ड छन् ।